Kodzero-dzevanhu, 08 Ndira 2019
Zimbabwe Council of Churches inoti Icharamba Ichirwira Nhaurirano dzeMapato neHurumende
Sangano remubatanidzwa wemakereke, reZimbabwe Council of Churches, rinoti richaramba richiedza kusanganisa vatungamiriri vemapato ezvematongerwo enyika anopikisa nevehurumende kuti pave nemushandirapamwe.
Vabereki Vochema Chema neKudhura kweMabhuku neZvimwe Zvikwanisiro
Vamwe vabereki muMasvingo vari kuchema chema kuti mitengo yemabhuku nezvimwe zvikwanisiro zvedzidzo zvakwira mitengo zvakanyanya zvapa kuti varemerwe sezvo zvikoro zvovhurwa nemusi weChipiri.
Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri muSouth Africa Zvokatyamadzwa neMamiriro eHupfumi Mushure Mekushanya paZororo
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvange zvaenda kuZimbabwe pazororo regoredzva nekisimusi zvinoti zvakazvionera zvega pamhuno sefodya kuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyaya dzezvehupfumi munyika.
Vamwe Varairidzi Vombosungwa Apo Hurumende Yotadza Kuwirirana neVashandi paNyaya yeMari Dzavanotambira.
Nhengo pfumbamwe dzesangano revadzidizi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUZ, dzakambochengetedzwa nemapurisa zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nesangano iri muHarare panguva iyo vamwe vashandi vehurumende vanga vachiita musangano nemamwe makurukota hurumende.
Hurumende Yoita Musangano Wechimbichimbi Wekuedza Kumisa Kuramwa Mabasa kweVarairidzi
Chikwata chehurumende chakasimba chinonzi chiri kutarisirwa kusangana nevamiriri vemasangano evashandi vehurumende pamusangano uri kutarisirwa kuzeya nezvemihoro pamwe nemashandiro evashandi ava vasati vatora matanho ekuramwa mabasa sezviri kuitwa navanachiremba.
Ndira 06, 2019
VanaChiremba Vanoti Kuramwa Mabasa Kuri Kuendera Mberi
Mubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Doctor Prince Butau vanoti kuramwa mabasa kwavanachiremba kuchiri kuenderera mberi kunyangwe vari kutarisirwa kuita musangano mangwana kuti votora danho ripi.